Ikhoyili yensimbi engenalutho egoqiwe engagqwali Abakhiqizi - China Cold iphuma insimbi engagqwali ikhoyili Factory, abahlinzeki
Ikhoyili yensimbi engenazinsimbi engu-202 ebandayo (0.2mm-3mm)
Ubukhulu: 0.2mm - 3.0mm
Ububanzi: 600mm - 1500mm, imikhiqizo encishisiwe pls hlola kumikhiqizo ye-strip
Isisindo sekhoyili enkulu: 10MT
Ikhoyili yensimbi engu-301 ebandayo egoqiwe (0.2mm-3mm)
310s abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili (0.2mm-3mm)
Ikhoyili yensimbi engenazinsimbi engu-409 409L ebandayo (0.2mm-8mm)
Ikhoyili yensimbi engenazinsimbi engu-410 410s (0.2mm-8mm)
430 Cold Cold asongwe Engagqwali Amakhoyili (0.2mm-8mm)
Ububanzi: I-600mm - 2000mm, imikhiqizo encishisiwe pls hlola kumikhiqizo ye-strip
Insimbi engagqwali engu-304 iyinsimbi engenasici eguquguqukayo, esebenza ngokugqwala ngaphandle kochungechunge lwama-200 lwensimbi engagqwali olunamandla. Izinga lokushisa eliphakeme futhi lingcono, lingaphakama libe ngama-degree ayi-1000-1200. Insimbi engagqwali engu-304 inokumelana nokugqwala kwensimbi okungagqwali nokumelana kangcono nokugqwala kwangaphakathi. Ku-asidi ye-oxidizing, ekuhlolweni kuphethe ngokuthi: ukugxila ≤ 65% we-nitric acid ngaphansi kwezinga lokushisa elibilayo, insimbi engagqwali engu-304 inokumelana nokugqwala okuqinile. Isixazululo se-alikhali kanye nama-organic amaningi nama-acid angaphili futhi anokumelana okuhle nokugqwala.
Insimbi engenasici engama-430 iyinsimbi ejwayelekile ejwayelekile enokumelana nokugqwala okuhle. Ukuqhuba kwayo okushisayo kungcono kune-austenite. I-coefficient yayo yokukhula okushisayo incane kune-austenite. Iyamelana nokukhathala okushisayo futhi ingezwe nge-elemental eqinisiwe ye-titanium. Izici zemishini ye-weld zilungile. Insimbi engagqwali engama-430 yokwakha umhlobiso, izingxenye ezishisa uphethiloli, izinto zasendlini, izinto zikagesi. I-430F ingezwe ekusebenzeni kwensimbi okusika kalula okungu-430, ikakhulukazi okokuzenzakalela, amabhawodi namantongomane. I-430LX Ingeza i-Ti noma i-Nb ku-430 yensimbi ukunciphisa okuqukethwe kwe-C nokwenza ngcono ukusebenza nokusebenza kahle. Isetshenziswa kakhulu emathangini amanzi ashisayo, ezinhlelweni zokuphakelwa kwamanzi ashisayo, izimpahla zangasese, izinto zasendlini ezihlala isikhathi eside, ama-flywheels ebhayisikili njll.
Ishidi Eligoqiwe Eligoqiwe 304 Ishidi Lensimbi Elingenalutho
Insimbi engagqwali engu-304 yinto ejwayelekile engagqwali, ukuminyana okungu-7.93 g / cm3, okwaziwa nangokuthi insimbi engagqwali engu-18/8. nemboni yokudla neyezokwelapha.
Izindlela zokulebula ezijwayelekile emakethe zifaka i-0Cr18Ni9 ne-SUS304, lapho i-0Cr18Ni9 ngokuvamile isho ukukhiqizwa okujwayelekile kukazwelonke, i-304 ngokuvamile isho ukukhiqizwa okujwayelekile kwe-ASTM, kanti i-SUS304 isho ukukhiqizwa okujwayelekile kwansuku zonke.
I-316 iyinsimbi ekhethekile engenasici, ngenxa yokwengezwa kwezakhi ze-Mo ekumelaneni nokugqwala, futhi amandla okushisa aphezulu athuthuke kakhulu, izinga lokushisa eliphakeme elifinyelela kuma-1200-1300 degrees, lingasetshenziswa ngaphansi kwezimo ezinzima.
Izinto ezingama-304 DQ DDQ zisetshenziswa kabanzi njengazo zonke izinhlobo zezimpahla zasekhishini zensimbi engagqwali, impahla ye-DDQ (ikhwalithi yokudweba ejulile): ibhekisa ezintweni ezisetshenziselwa ukudweba okujulile (ukusetha kabusha), okuyikho esikubiza ngokuthi okuthambile. Isici esiyinhloko sale nto ukunwebeka kwayo okuphezulu (≧ 53%), ubulukhuni Obuphansi (≦ 170%), ibanga lokusanhlamvu kwangaphakathi eliphakathi kuka-7.0 ~ 8.0, ukusebenza okuhle kakhulu kokudweba. Izinkampani eziningi ezikhiqiza ama-thermos namabhodwe ngokuvamile anezilinganiso eziphakeme zokucubungula (I-BLANKING SIZE / ubukhulu bomkhiqizo), futhi izilinganiso zazo zokucubungula zingu-3.0, 1.96, 2.13, no-1.98, ngokulandelana.